ကားမောင်းသူအတွက် Sleep System ကိုအခမဲ့ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်သက်သာစွာ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
$6.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $7.99
ကားမောင်းသူအတွက်အိပ်စက်ခြင်းစနစ် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
rated Power: 8-25000Hz
သင်၏လက်ျာနားရွက်နောက်ဘက်တွင်ထားပါ။ သတိပေးသည်ခေါင်းသည် ၁၅ ဒီဂရီမှ ၂၀ ဒီဂရီအထိကျသောအခါ။
ဖွင့် / ပိတ်ခလုတ်။
အလေးချိန်: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 14 ဂရမ်
အရွယ်အစား: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5.8 * 5.5cm
၎င်းသည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ သင်သည်ခေါင်းကိုရှေ့သို့မြှောက်လိုက်ပြီးတည့်တည့်ထိုင်နေစဉ်အသံမထွက်သောအခါအသံသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
၁ x အိပ်စက်ခြင်းနှိုးစက်
класссныйприбор! Отличноработает! Спасибопродавцу။ Доставкаоколомесяца။
မှာစာကို ၁၁.၁၁ ၁၁.၁၁ ရက်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ပန့်ဇန်နန်ဒေသတွင်ပေးပို့သောအကြံပြုချက်များသည်အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းပေးသူကနှစ်သက်သည်
ငါ့အမှုအရာသည်ငါ၌မရှိ၊ ငါပြုသည်ကို၎င်း၊ ငါကဒီပစ္စည်းကိုငါငါ့အဘို့ဤမျှလောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, သင့်ရဲ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငါနှင့်အတူဤကဲ့သို့သောအကြှနျုပျ၏အရပျမှနျမှနျပါသညျ။ Recientemente recibí mi producto y estoy satisfecha